19 akanakisa WordPress madingindira ehukama kushambadzira kwe2021
FR : https://www.hebergementwebs.com/site-internet/19-meilleurs-themes-wordpress-pour-le-marketing-d-affiliation-pour-2021
EN : https://www.hebergementwebs.com/website/19-best-wordpress-themes-for-affiliate-marketing-for-2021
ES : https://www.hebergementwebs.com/sitio-de-internet/19-mejores-temas-de-wordpress-para-marketing-de-afiliados-para-2021
GA : https://www.hebergementwebs.com/suíomh-gréasáin/19-bestpress-wordpress-theme-for-affiliate-marketing-for-2021
BG : https://www.hebergementwebs.com/уебсайт/19-най-добри-теми-за-wordpress-за-филиал-маркетинг-за-2021
FY : https://www.hebergementwebs.com/webside/19-beste-wordpress-tema-s-foar-affiliate-marketing-foar-2021
HA : https://www.hebergementwebs.com/gidan-yanar-gizo/19-mafi-kyawun-kalma-jigogi-don-alaƙar-tallatawa-don-2021
AM : https://www.hebergementwebs.com/ድህረገፅ/19-ምርጥ-የቃል-ጽሑፍ-ገጽታዎች-ለተባባሪ-ግብይት-ለ-2021
EU : https://www.hebergementwebs.com/webgunea/19-best-wordpress-themes-for-affiliate-marketing-2021-erako
ID : https://www.hebergementwebs.com/situs-web/19-tema-wordpress-terbaik-untuk-pemasaran-afiliasi-untuk-2021
CS : https://www.hebergementwebs.com/webová-stránka/19-best-wordpress-themes-for-affiliate-marketing-pro-2021
DA : https://www.hebergementwebs.com/internet-side/19-bedste-wordpress-temaer-til-affiliate-marketing-til-2021
CA : https://www.hebergementwebs.com/lloc-web/19-best-wordpress-themes-for-affiliate-marketing-for-2021
HR : https://www.hebergementwebs.com/web-stranica/19-najboljih-wordpress-tema-za-pridruzeni-marketing-za-2021
BS : https://www.hebergementwebs.com/web-stranica/19-najboljih-wordpress-tema-za-pridruzeni-marketing-za-2021
DE : https://www.hebergementwebs.com/webseite/19-beste-wordpress-themen-fur-affiliate-marketing-fur-2021
HE : https://www.hebergementwebs.com/אתר-אינטרנט/19-הטובים-ביותר-וורדפרס-נושאים-לשיווק-שותפים-לשנת-2021
FA : https://www.hebergementwebs.com/سایت-اینترنتی/19-بهترین-تم-وردپرس-برای-بازاریابی-وابسته-برای-2021
EL : https://www.hebergementwebs.com/δικτυακός-τόπος/19-best-wordpress-θέματα-για-συνεργάτες-μάρκετινγκ-για-2021
CO : https://www.hebergementwebs.com/situ-web/19-best-wordpress-themes-per-affiliate-marketing-per-2021
HU : https://www.hebergementwebs.com/weboldal/19-legjobb-wordpress-tema-affiliate-marketing-2021-hez
EO : https://www.hebergementwebs.com/retejo/19-plej-bonaj-wordpress-temoj-por-filia-merkatado-por-2021
CY : https://www.hebergementwebs.com/gwefan/19-best-wordpress-theme-for-affiliate-marketing-for-2021
ET : https://www.hebergementwebs.com/veebisaidil/19-parimad-wordpress-teemad-2021.-aasta-sidusreklaamimiseks
HT : https://www.hebergementwebs.com/sit-entènèt/19-pi-bon-wordpress-tem-pou-afilye-maketing-pou-2021
GU : https://www.hebergementwebs.com/વેબસાઇટ/2021-માટે-સંલગ્ન-માર્કેટિંગ-માટે-19-શ્રેષ્ઠ-વર્ડપ્રેસ-થીમ્સ
AF : https://www.hebergementwebs.com/webwerf/19-beste-wordpress-temas-vir-filiaal-bemarking-vir-2021
GL : https://www.hebergementwebs.com/páxina-web/19-mellores-temas-de-wordpress-para-mercadotecnia-afiliados-para-2021
GD : https://www.hebergementwebs.com/làrach-lìn/19-best-wordpress-theme-for-affiliate-marketing-for-2021
FI : https://www.hebergementwebs.com/verkkosivusto/19-paras-wordpress-teemat-tytaryhtiomarkkinoinnille-vuodelle-2021
AR : https://www.hebergementwebs.com/موقع-انترنت/أفضل-19-موضوع-ووردبريس-للتسويق-بالعمولة-لعام-2021
BN : https://www.hebergementwebs.com/ওয়েবসাইট/1921-সেরা-ওয়ার্ডপ্রেস-থিমস-জন্য-2121-এর-জন্য-অনুমোদিত-বিপণন
BE : https://www.hebergementwebs.com/вэб-сайт/19-лепшых-тэм-wordpress-для-афіліраванага-маркетынгу-на-2021-год
AZ : https://www.hebergementwebs.com/veb-sayt/2021-ci-il-ucun-ortaq-marketinq-ucun-ən-yaxsi-19-wordpress-temasi
PT : https://www.hebergementwebs.com/local-na-rede-internet/19-best-wordpress-themes-for-afiliado-marketing-para-2021
NL : https://www.hebergementwebs.com/website/19-beste-wordpress-thema-s-voor-affiliate-marketing-voor-2021
KA : https://www.hebergementwebs.com/ვებსაიტი/19-საუკეთესო-wordpress-თემები-შვილობილი-მარკეტინგისთვის-2021-წლისთვის
PL : https://www.hebergementwebs.com/stronie-internetowej/19-najlepszych-motywow-wordpress-dla-marketingu-afiliacyjnego-na-2021
NY : https://www.hebergementwebs.com/tsamba-la-webusayiti/19-yabwino-wordpress-mitu-ya-othandizira-otsatsa-kwa-2021
IS : https://www.hebergementwebs.com/vefsíðu/19-bestu-wordpress-þemu-fyrir-tengd-markaðssetning-fyrir-2021
IG : https://www.hebergementwebs.com/weebụsaịtị/19-kacha-mma-wordpress-gburugburu-maka-mmekọ-mmekọ-for-2021
RO : https://www.hebergementwebs.com/site-ul-web/19-best-wordpress-themes-for-affiliate-marketing-for-2021
KO : https://www.hebergementwebs.com/웹-사이트/19-best-wordpress-themes-for-affiliate-marketing-for-2021
KN : https://www.hebergementwebs.com/ಜಾಲತಾಣ/20-21-ಕ್ಕೆ-ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ-ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ-19-ಅತ್ಯುತ್ತಮ-ವರ್ಡ್ಪ್ರೆಸ್-ಥೀಮ್ಗಳು
NO : https://www.hebergementwebs.com/nettsted/19-beste-wordpress-temaer-for-tilknyttet-markedsføring-for-2021
OR : https://www.hebergementwebs.com/ୱେବସାଇଟ୍-|/19-ଶ୍ରେଷ୍ଠ-ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍-ଥିମ୍-ପାଇଁ-ଆଫିଲିଏଟ୍-ମାର୍କେଟିଂ-ପାଇଁ-2021-ପାଇଁ-|
MR : https://www.hebergementwebs.com/संकेतस्थळ/-2021-साठी-सर्वोत्कृष्ट-wordpress-थीम-संबद्ध-विपणन-साठी
IT : https://www.hebergementwebs.com/sito-web/19-migliori-temi-wordpress-per-marketing-di-affiliazione-per-2021
MT : https://www.hebergementwebs.com/websajt/19-l-ahjar-wordpress-temi-ghall-marketing-affiljat-ghall-2021
RU : https://www.hebergementwebs.com/Веб-сайт/19-лучших-тем-wordpress-для-партнерского-маркетинга-на-2021-год
LT : https://www.hebergementwebs.com/interneto-svetainė/19-geriausiu-„wordpress“-temu-filialu-rinkodarai-2021-m
PA : https://www.hebergementwebs.com/ਵੈਬਸਾਈਟ/19-ਸਰਬੋਤਮ-ਵਰਡਪ੍ਰੈਸ-ਥੀਮ-ਐਫੀਲੀਏਟ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ-2021-ਲਈ
LV : https://www.hebergementwebs.com/vietne/19-labakie-wordpress-motivi-filialu-marketingam-2021.-gadam
JA : https://www.hebergementwebs.com/ウェブサイト/19-best-wordpress-themes-for-affiliate-marketing-for-2021
MS : https://www.hebergementwebs.com/laman-web/19-terbaik-wordpress-tema-untuk-gabungan-pemasaran-untuk-2021
RW : https://www.hebergementwebs.com/urubuga/19-nziza-ijambo-press-insanganyamatsiko-yo-gufatanya-kwamamaza-kuri-2021
LB : https://www.hebergementwebs.com/websäit/19-bescht-wordpress-themen-fir-filial-marketing-fir-2021
MY : https://www.hebergementwebs.com/ဝဘ်ဆိုက်/1921-အကောင်းဆုံးစကားလုံး-အခင်းအကျင်း-များအတွက်-affiliate-marketing-for-2021
PS : https://www.hebergementwebs.com/ویب-پاه/د-2021-لپاره-غوره-ورډپریس-تیمونه-د-وابسته-بازار-موندنې-لپاره
ML : https://www.hebergementwebs.com/വെബ്സൈറ്റ്/20-ന്-അഫിലിയേറ്റ്-മാർക്കറ്റിംഗിനായി-19-മികച്ച-വേർഡ്പ്രസ്സ്-തീമുകൾ
KY : https://www.hebergementwebs.com/веб-сайт/2021-жылга-карата-өнөктөштүк-маркетинг-үчүн-19-мыкты-wordpress-темасы
MN : https://www.hebergementwebs.com/вэбсайт/2021-оны-түншлэлийн-маркетингийн-шилдэг-wordpress-сэдвүүд
KK : https://www.hebergementwebs.com/веб-сайт/2021-жылға-арналған-серіктес-маркетингке-арналған-ең-жақсы-wordpress-тақырыптары
SO : https://www.hebergementwebs.com/bogga/19-ugufiican-ereyga-mawduucyada-loogu-talagalay-suuq-geynta-loogu-talagalay-2021
ZU : https://www.hebergementwebs.com/iwebhusayithi/19-best-wordpress-themes-for-lobulungu-marketing-for-2021
UK : https://www.hebergementwebs.com/веб-сайт/19-найкращих-тем-для-wordpress-для-афілійованого-маркетингу-на-2021-рік
SQ : https://www.hebergementwebs.com/faqe-në-internet/19-temat-me-te-mira-te-wordpress-it-per-marketing-bashkepunetor-per-2021
VI : https://www.hebergementwebs.com/trang-mạng/19-best-wordpress-themes-for-affiliate-marketing-for-2021
TR : https://www.hebergementwebs.com/İnternet-sitesi/2021-icin-bagli-kurulus-pazarlamasi-icin-en-iyi-19-wordpress-temalari
SV : https://www.hebergementwebs.com/hemsida/19-basta-wordpress-teman-for-affiliate-marknadsforing-for-2021
SW : https://www.hebergementwebs.com/tovuti/19-bora-neno-la-neno-kwa-ushirika-uuzaji-wa-2021
ZH-TW : https://www.hebergementwebs.com/網站/1921年最佳wordpress主題聯盟營銷2021年
UG : https://www.hebergementwebs.com/توربېكەت/2021-يىلدىكى-شاخلىتىپ-سېتىش-سېتىش-ئۈچۈن-19-ئەڭ-ياخشى-سۆز-بېسىش-تېمىسى
TT : https://www.hebergementwebs.com/сайты/20-иң-яхшы-wordpress-темалар-филиал-маркетинг-2021-өчен
YO : https://www.hebergementwebs.com/aaye-ayelujara/19-ti-o-dara-ju-wordpress-awọn-akori-fun-isopọmọ-tita-fun-2021
XH : https://www.hebergementwebs.com/iwebhusayithi/i-19-eyona-ilungileyo-ye-wordpress-imixholo-yokuhambelana-nokuthengisa-kwe-2021
SK : https://www.hebergementwebs.com/webovú-stránku/19-najlepsich-wordpress-tem-pre-affiliate-marketing-pre-2021
UR : https://www.hebergementwebs.com/ویب-سائٹ/1921-بہترین-ورڈپریس-تھیمز-برائے-ملحق-مارکیٹنگ-2021-کے-لئے
TK : https://www.hebergementwebs.com/web-sahypasy/2021-nji-yyl-ucin-19-in-gowy-soz-soz-mowzuk-sahamca-marketing-marketing
TA : https://www.hebergementwebs.com/இணையதளம்/20-க்கு-19-சிறந்த-வேர்ட்பிரஸ்-கருப்பொருள்கள்-இணை-சந்தைப்படுத்தல்-க்கு
SL : https://www.hebergementwebs.com/spletna-stran/19-najboljsih-wordpress-tem-za-pridruzeno-trzenje-za-2021
ST : https://www.hebergementwebs.com/webosaete/19-best-wordpress-themes-for-affiliate-marketing-for-2021
TE : https://www.hebergementwebs.com/వెబ్‌సైట్/19-ఉత్తమ-wordpress-థీమ్స్-ఫర్-అనుబంధ-మార్కెటింగ్-2021-కోసం
UZ : https://www.hebergementwebs.com/veb-sayt/2021-yil-uchun-marketing-bo-yicha-19-eng-yaxshi-wordpress-mavzular
Kugadzira nzvimbo yekubatana ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekuratidzira mari mumutsara.
Kuita mari yako saiti neimwe nzira - senge s - inoda kuti iwe ugadzire traffic yakawanda usati waita chero mari. Asi ne yakabatana kushambadzira , unogona kuita mari nemari diki yetraffic yakanangwa. Ingo wedzera zvinongedzo kune zvigadzirwa nemasevhisi uye iwe unogona kuwana komisheni kune wese mutengi waunongedzera.
PaWordPress, kugadzira iyo inobatsira inobatana saiti iri nyore sekusarudza kurudyi theme uye kuisa chinongedzo chekuvanza plugin .
Mune chino chinyorwa, isu tasarudza akanakisa WordPress madingindira eakabatana kushambadzira. Iwe unogona kushandisa chero cheizvi ku kuvaka iyo WordPress webhusaiti uye nekukurumidza tanga kugadzira mari.
Zvakanakisa W madingindiraordPress yeAffiliate Marketing
Iwo akanakisa madhisiki eWordPress eanobatana kushambadzira anozopa akafanogadzirirwa matemplate uye akavakirwa-mukati maficha senge nyeredzi ratings uye vhidhiyo nemifananidzo mapikicha zvinoita kuti zvive nyore kugadzira inoenderana uye inoshanda chigadzirwa wongororo . Pazasi pane muunganidzwa wenyaya dzemisoro dzinozokubatsira iwe kuvaka inobatsira WordPress saiti ine Affiliate Ate Kushambadzira.
Neine minimalist dhizaini, yakavakirwa-mukati dhizaini jenareta, uye akati wandei monetization sarudzo, Zeen ndeimwe ye akanakisa ongororo WordPress madingindira . NaZeen, vanobatana nevashambadziri vanogona kuvaka mablog anobatsira, magazini, nzvimbo dzenhau, uye zvitoro zveWooCommerce zvine wongororo.
Izvo zvakasarudzika nezveZeen ndeyekuti inouya yakasungwa ne Ngatitarisei pa plugin. Iyi plugin inokutendera iwe kusarudzapakati pezvakawanda dhizaini matemplate ekuongorora kwako uye wedzera risingaperi rakabatana mabhatani pamwe nezvakanaka nezvayakaipira.
Pamusoro pekubatana nehukama, unogona kuita mari yako saiti nezvishambadziro, zvakatsigirwa zvakatumirwa, mabhokisi ekusimudzira, nezvimwe.
Izwi izita rakakurumbira reWordPress theme yevanyori vezvinyorwa vanoda kuwana mari yemubatanidzwa
Iyi theme inopa pre-yakagadzirirwa demo yenhau kana webhusaiti yemagazini, blog, kana imwe saiti-yakapfuma saiti. Unogona kugadzirisa iyi demo neIzwi rine simba theme theme pani. Iyo inopa asingagumi mafonti uye mavara, pakati pezvimwe zvinoshamisa dhizaini maficha. Iwe unogona ipapo kushandisa yakavakirwa-mukati banner ad system uye Meks Smart ThemeForest widget kuratidza uye kusimudzira zvakabatana zvigadzirwa.n pane yako saiti.
Iyi theme inopa zvinopfuura gumi zvakafanotaurwa demos uye makumi maviri nemaviri marongero emukati. Mercury inopawo matatu marudzi ezvinyorwa zvemunhu zvekutumira wongororo uye zvinyorwa pamabhonasi, kupaaways uye makodhi ekusimudzira nevekunze vanobatana zvinongedzo. Ipo ichigadzirirwa makasino nemasaiti emitambo kunyanya, iwe unogona kunyatsogadzirisa chero eaya mademo kana marongero - kusanganisira zvinyorwa, mifananidzo, musoro, tsoka,
uye color scheme - kuti uenzane neyako yakasarudzika niche uye brand.
Divi iri rakawandisa WordPress theme iyo yakakwana kune chero webhusaiti iwe yaunodaiwe unoda kugadzira, kusanganisira yakabatana yekushambadzira saiti.
Iyo theme inowirirana zvizere neiyo WooCommerce plugin kuti iwe ugone nyore kuvaka yako online chitoro uye kutengesa zvigadzirwa.
Iyo Divi theme inopihwa simba neiyo Divi Builder yekukwevera uye kudonhedza plugin, iyo inopa akawanda maficha auchazofanira kugadzira yakagadzirira yakabatana zvinyorwa zvekushanda. Semuenzaniso, unogona kuwedzera tafura dzemitengo, zvipupuriro zvevatengi, tafura yezviri mukati, uye mabhatani, nekungodhonza nekuvakanda pane iro peji.
Divi inouyawo neanopfuura mazana maviri akafanorongedzwa mapakeji ayo imwe neimwe yakagadzirirwa rimwe bhizinesi niche. Saka kunyangwe iwe urikumisikidza yakabatana saiti yakatenderedza apothecary, magirazi ezuva, kushambadzira imbwa, maruva uye zvimwe, Divi ane pre-yakagadzirirwa pack yako.
Splash idingindira rine simba kwazvo kubva kuMyThemeShop inosanganisa ongororo uye blog. Nechero ipi zvayo masere masere akagadzirirwa dhizaini echikafu, mafirimu, mitambo, mitambo, uye mamwe mabhurogu niches, unogona kutanga bhurogi rekudzokorora nehukama hwehukama uye wotanga kuwana mari ipapo ipapo.
Kuwedzera kune kwayo inoteerera dhizaini, Splash inogadzirwa neHTML5 neCSS3 kuti igone kushanda sezvinobvira. Iyo inouya neyakavakirwa-mukati ongororo system kuti iwe ugone kuwedzera nyeredzi ratings uye zvakapfuma snippets kunze kwebhokisi. Izvo zvinouyawo zvine simba theme theme pani, pamusoro pe600 Mafonti eGoogle, anoshanduka marongero epamba peji, uye isina muganho mavara uye kumashure.
Kana iwe uchida kugadzira yekukurumidza kurodha uye SEO yakagadziriswa saiti kuti uwane kwakanyanya kuoneka kwezvigadzirwa zvako zvakabatana, Splash isarudzo huru.
Nyanzvi isarudzo yakanaka kumakambani emari uye nevanhu vanoda ku
gadzira nyanzvi inotarisisa WordPress saiti
kukwezva nekuvaka kuvimba kubva kune vateereri uku vachikurudzira zvigadzirwa zvakabatana. .
Iyi theme inouya neVisual Composer dhonza uye udonhedze plugin uye ine pamusoro pe25 mademo ekuti iwe ugadzire saiti yako nekukurumidza uye nyore. Izvo zvinouyawo nebhurogu, masevhisi, portfolio, uye kesi yekudzidza marongero ekumhanyisa dhizaini dhizaini uye kutanga kutarisisa mukuwedzera zvakabatana zvinongedzo kune yako saiti uye kugadzira mari.
REHub chinhu chinotonhorera - Rich WordPress theme inogona kushandiswagadzira yakabatana yekutengesa saiti.
REHub inosanganisira anopfuura gumi nemashanu masayiti emademo ekusarudza kubva. Aya madhimoni akagadzirirwa akasiyana bhizimusi zvinangwa zvinosanganisira ecommerce zvitoro, mutengo wekuenzanisa masosi, - revatengesi misika, uye ongorora nzvimbo - zvese izvo zvinogona kuve mari nemari yemubatanidzwa.
Iyi tema inopfuura yekungobatana yekushambadzira theme. Iyo inouya iine masimba maficha anotsigira chigadzirwa kuenzanisa, misika-yakawanda yevatengesi misika, coupon manejimendi, uye zvimwe. Iyo zvakare yakanyatsogadzirirwa kushanda zvakakwana neakanyanya kufarirwa ehukama plugins.
Iwe zvakare une sarudzo yekuita mari yako saiti nekugadzira yakabhadharwa yekutumira mapakeji.
CouponHut inopa yakanaka yemazuva ano dhizaini yemutsipa mawebhusaitimaponi uye vanobatana, uye inouya nemaficha aunoda kuvaka saiti inobudirira.
Demo rayo rakavakwa kare rine vhidhiyo kumashure, mifananidzo inotsvedza, chikamu chegridhi, uye akavakirwa-mukati mablog uye maficha eTwitter. CouponHut inouyawo neyakavakirwa-mukati chiyero system, yakasarudzika widgets, uye ine simba sarudzo mapaneru ekugadzira anoshanda zvigadzirwa mapeji uye ongororo, kungave kune ako pachako zvigadzirwa kana kune vanobatana.
Marketplus ishoko reWordPress remhando dzese dzevatengesi vanosanganisira vanobatana nevashambadzi.
Kunze kwekugadziriswa kwekushandurwa, iyi tema inonyatsoteerera kuona kuti yako saiti inotaridzika pakuru pane desktop, piritsi kana smartphone. Iyi tema inopawo yakasarudzika majeti kuratidza ako achangobva kutumira, ruzivo rwekuonana, mifananidzo yee social network uye tag makore. Kubva pane typography uye color scheme kusvika padding, iwe unezere kutonga pamusoro pekugadzira nekuda kweMarketplus 'robust theme sarudzo pani uye Visual Composer plugin, iyo inouya netemusoro. Uchishandisa zvishandiso izvi, unogona kugadzirisa pre-yakagadzirirwa blog, portfolio, timu, uye mapeji euchapupu
Herald ibepanhau rinobudirira uye ezine theme iyo inogona kukubatsira iwe kuvaka uye kugadzirisa iyo-yemukati-yakapfuma saiti inehukama hwehukama. Kupa pamusoro mazana mazana mana marongero epamba, iwe unogona kuratidza zvirimo mumabhara epadivi, grid, kana inotsvedza. Iwe unogona zvakare kuratidza mabhana emashambadziro uye nemubatanidzwa zvigadzirwa mune yakatsanangurwa p nzvimbo dzekushambadzira kuti uwane mari nyoresaiti yako.
11. Tokoo Tokoo inowanza WooCommerce theme yakanakira kushambadzira kwakabatana, kudonhedza, uye misika yevatengesi vakawanda. Yakagadzirirwa kugadzira seti ye-e-commerce saiti sezviri nyore sezvinobvira, Tokoo inopa mashanu epamba peji demos, mashanu misoro yemitaira inosanganisira imwe yefoni, matanhatu akafanorongwa marongero eruvara uye akawanda emapeji emukati. Iwe unowana mapeji akafanogadzirwa-ezvitoro, WooCommerce chaiwo mapeji, uye mapeji eblog.
SteadyIncome ndiyo yakanakisa theme kune vanobatana nevashambadzi vanoda kuita mari yavo yeWordPress blog . Iri dingindira rinopa sarudzo uye maficha aunoda kuti unyatsosimudzira zvigadzirwa uye kuwedzera yako yemubatanidzwa mari. Kunze kwekuteerera dhizaini, SteadyIncome inopa ine simba tsamba yekunyorera chishandiso, afkunyorwa kwezvakaratidzwa zvigadzirwa uye mudiwa logo logo inotsvedza.
Iyi tema yakagadziridzwa zvakare kuGoogle AdSense uye nezvimwe zvekushambadzira sarudzo kuti utange kuita mari pane yako saiti ingangoita ipapo ipapo.
13. Dealsdot Dealsdot ndeye yakazara misoro-yevashambadzi yemusika theme iyo vanobatana nevashambadzi vanogona kushandisa kusimudzira nekutengesa zvakabatana zvigadzirwa. NeDealsdot, unogona kugadzira coupon nemapeji emichero uye wedzera zvinongedzo zvekubatana kune yega yega. Iko kune zvakare yakasarudzika coupon widget iyo inobvumira vashanyi kuteedzera coupon kodhi nekudzvanya kamwe chete. Iwe unogona zvakare kuendesa zvakare vashanyi kune yakakanganiswa webhusaiti iwe uchiteedzera kodhi.
Kugadzira yako yakabatana saiti iri nyore neDealsdot. Iwe unowana unogamuchira zvakakwana dhizaini uye iyo yakavakirwa-mukati WPBakery peji muvakie kuitira kuti iwe ugone kugadzirisa demo pasina
14. Yosemite Yosemite ishoko reWordPress rakafuridzirwa neApple's Yosemite OS X dhizaini. Nemafonti ari nyore kuverenga uye neparakavara inopesana, iyi yakachena uye yakashongedzwa theme ndiyo sarudzo yakasarudzika yemararamiro, fashoni, kana mablog mabhugi anotarisa kusimudzira zvakabatana zvigadzirwa. Yosemite ine simba theme theme pani ichakubatsira iwe nekukurumidza uye nyore kugadzirisa kutaridzika kweblog rako. Une risingagumi ruvara uye kumashure sarudzo,
, uye retina yakagadzirira mifananidzo, pakati pezvimwe zvigadzirwa zvekugadzira kuita yako saiti.
Yosemite inoenderana neiyo ye Yakanakisa WordPress Ongororo plugins
- WP Ongororo Pro - saka y Unogona kugadzira zvigadzirwa zvakagadzirwa zvakanaka zvezvinhu zvakabatana. Iyi theme ndeyeyakagadzirirwawo AdSense kune imwezve sosi yemari.
Yakabatana Bloglet ndeye Blogrid
dhata yemwana theme iyo inogona kushandiswa kuvaka yepamusoro blog nehukama hwehukama.
Iyi yemahara theme inopa mashoma uye yakachena dhizaini nenzvimbo dzakawanda kuratidza mabanner ads uye zvakabatana zvigadzirwa. Dhizaini yaro inoteerera zvizere ichaitawo kuti wongororo dzako nezvimwe zvirimo zvioneke zvakanaka pamatafura, mahwendefa uye nhare mbozha.
> CouponXL ndeyemazuvano madhiri, mitengo uye maponi eWordPress theme yaunogona kushandisa kuvaka yako yakabatana yekushambadzira saiti. Iyi theme inoteerera inopa akati wandei maficha ezvehukama masosi kunyanya. Semuenzaniso, CouponXL inokutendera kuti uvanzeakagadzirira-made akabatana zvinongedzo saka haufanire kuisa chinongedzo cloaking plugin. Iyo zvakare inotsigira maviri marudzi echibvumirano, kusanganisira zvakabatana zvibvumirano, uye matatu marudzi emaponi, kusanganisira ehukama link coupon.
, iyi theme inouya neanoteerera zvakakwana uye SEO yakagadziridzwa dhizaini.
17. Flatter Flatter neAppthemes ndeimwe yeanonyanya kufarirwa WordPress coupon madingindira anowanikwa. Dingindira remwana reClipper, Flatter rinogona kushandiswa kuvaka premium affiliate coupon saiti.
zvakanakisa zvakatsetseka WordPress madingindira
, Clipper ine minimalist dhizaini inoshandisa yakashinga typography, yakajeka mavara, uye akareruka mifananidzo kuona kuti zvemukati - nezvako zvakabatana zvigadzirwa - zvinomira kunze.
Chimwe chezvinhu zvaro zvakakosha chinokutendera iwekumanikidza kuvhura ako ehukama zvinongedzo kuti vashanyi vasazombopotsa chinobatana chinongedzo. Zvimwe zvinhu zvakakosha zvinosanganisira kunyatsoteerera dhizaini, mega mamenu, uye akajairwa majeti ekuronga coupon nechikamu, chitambi, uye mhando.
Dingindira remwana re
, Kubatana Kushambadzira isarudzo yemahara yekuvaka rakakura rakabatana rezvesaiti saiti mumaminetsi. Affiliate Marketingly inouya neyakanaka kwazvo uye yakachena dhizaini inozojekesa chimwe nechimwe chezvigadzirwa zvako kuti zvionekwe zvakanyanya. Kune mamwe matani enzvimbo yekushambadzira yaunogona kushandisa kusimudzira zvakabatana zvigadzirwa kana Google AdSense ads yemamwe mari. Aya majeti anotsigira mufananidzo kana vhidhiyo kushambadzira.
Kugadzirisa dhizaini yakoyakabatana saiti, iwe unogona kurodha yakasarudzika logo, favicon, mufananidzo uye kumashure color.
Kana iwe uri kuyedza kushandisa yako WordPress blog kuti uwane mari, saka Admania ndiyo yakanakisa theme yako.
akanakisa madingindira eWordPress ane nzvimbo yekushambadza
, Admania inopa makumi maviri akagadziridzwa marongero eshambadziro. Chimwe chezvinhu zvakasarudzika zveAdmania ndeye Front-End Ad Live Mhariri. Uine mupepeti uyu, unogona kugadzirisa s zvakananga mumusoro wenyaya usingapinde muIzwi rako reDashboard. Admania inogadzirisirwawo kumhanya, izvo zvakakosha pakutendeuka.
Kuti udzidze zvakawanda pamusoro penyaya iyi, tarisa
Admania: dingindira rakakura reWordPress rekuwedzera mari yekushambadza
Kutanga kuwana mari nhasi 'hui IyoKubatana kushambadzira ndeimwe yemhando yepamusoro yemari yemabloggi uye emabhizinesi epamhepo. Paunenge iwe waisa imwe yeanobatana ekushambadzira madingindira pamusoro uye plugin senge ThirstyAffiliates
, zvese zvauchazoda kuti uite kutarisa kugadzira hukuru zvemukati zvine hwakadzama, hwakavimbika chigadzirwa ongororo - uye mirira iyo mari kuti tanga kudira mukati.
Chinyorwa cheMupepeti: Chinyorwa ichi chakatanga kuburitswa muna Gumiguru 2019 uye chakagadziridzwa kuzara.